समाजलाई चक्मा दिदै लम्जुङमा बाहुनको छोराले गरे सार्कीको छोरीसँग यस्तो धुमधाम मागी विवाह! – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > समाजलाई चक्मा दिदै लम्जुङमा बाहुनको छोराले गरे सार्कीको छोरीसँग यस्तो धुमधाम मागी विवाह!
admin June 27, 2020 जीवनशैली, समाचार, समाज	0
अहिले समाजमा विस्तारै अन्तरजातीय विवाहलाई मान्यता दिन थालिएको छ । कतिपय स्थानमा अन्तरजार्तिय विवाह गरेका कारण सामाजिक वहिष्कारको सामना गर्नुपरेका उदाहरण यहिँ छन् भने पछिल्लो समयमा भने अन्तरजातिय विवाह समेत धुमधामका साथ हुन थालेका छन् । अधिकांश अन्तरजातिय विवाह प्रेमका कारण हुन्छन् । यतिबेला समाजलाई चक्मा दिदै लम्जुङमा बाहुनको छोरा र सार्कीको छोरीबीच भयो धुमधामसंग मागी विवाह भएकाे छ ।
दुःखद खबरः ११ वर्षीया बालिकाको क्वारेन्टिनमा मृत्यु